के माधव नेपालले बाँडेकाे ‘कोरोना जन्तर’ले साँच्चै कोरोना भगाउछ ? कहाँ पाउछ, कति पर्छ मूल्य — Imandarmedia.com
के माधव नेपालले बाँडेकाे ‘कोरोना जन्तर’ले साँच्चै कोरोना भगाउछ ? कहाँ पाउछ, कति पर्छ मूल्य
काठमाडौं । ‘सानो केटाकेटी हुँदा धामीले भुत–प्रेत लाग्दैन भनेर जन्तर लगाइदिन्थे, अहिले कोरोना जन्तर लगाइदिए’ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले घाँटीमा भिरेको ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ देखाउँदै भने ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले केही नेतालाई ‘कोरोना जन्तर’ बाँडेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य न्यौपानेले पनि यसबारे चासो राखे । नेता नेपालले उनलाई पनि एउटा लगाइदिए ।
उनले भने -‘कार्ड माधव नेपालले ल्याउनुभएको हो । डाक्टरहरूले दिएको भन्ने छ । जापानमा पनि धेरैले लगाएर हिँड्छन् रे । घाममा नदेखाउनू भन्ने नियम रहेछ । अरूले लगाएको देखेपछि मैले मागेँ । यसले भाइरस उडाउँछ कि उडाउँदैन, उही बेसारको धूलोजस्तै हो कि †’
‘घाममा चाहिँ नदेखाउनु भन्ने रहेछ’ कोटले कार्ड छोप्दै न्यौपानेले बालुवाटारमा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘यसले (कोरोना) उडाउँछ कि उडाउँदैन थाहा छैन । उही बेसारको धुलो जस्तो हो कि…।’
न्यौपानेले भने जस्तै बुधबारकै बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा यो कार्ड देखिन्छ । नेता नेपाल आफैँले घाँटीमा भिरेका थिए । झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूले पनि यो लगाएको देखिन्छ ।
नेता नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई बाँडेको कोरोना जन्तरको नाम ‘भाइरस ब्लकर डिसइन्फेक्सन कार्ड’ हो । एउटा कार्डको ६५० रुपैयाँ तिरेर किनिएको हो । यो जन्तर लगाएको तस्विर बाहिर आएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्रै अनेक खालका टिका टिप्पणी सुरु भएका छन् ।